Typesdị 6 okpokoro akwa akwa iji nye ime ụlọ ime ụlọ | Bezzia
Maria onyekwere | 30/04/2021 18:00 | Ngwongwo
Nri abalị bụ akụkụ nke otu arịa ụlọ ahụ anyị na-atụle dị mkpa na ime. Ha bụ ezigbo ndị enyi iji mee ka nchekwa nke ime ụlọ dịkwuo elu ma dị oke mkpa ịnwe ihe ndị ahụ niile anyị nwere ike ịchọ mgbe anyị na-ehi ụra ma bilie.
Kedu ihe ndị ị na-eji tupu ihi ụra na mgbe ị na-eteta? Kedu ihe ndị ọzọ na-abụghị ndị ị ga-achọ inwe ike ịhazi n'ọdụ abalị? Mụọ mkpa gị, Chọpụta ụdị ejiji abalị ga-adabara ọmarịcha mma nke ụlọ ihi ụra wee họrọ nke kacha mma maka mkpa gị.
1 Na-ese n'elu mmiri
2 Nordic sitere n'ike mmụọ nsọ
3 Dị kpochapụwo na nke ọkaibe
Na-ese n'elu mmiri
Ihe nkiri abalị na-ese n’elu mmiri bụ ụzọ dị mma maka icho mma oghere. Mgbe ị na-enweghị ohere dị ukwuu n'akụkụ abụọ nke ihe ndina ma ọ bụ na ịchọghị ịkwụnye ụlọ ahụ na nnukwu arịa, ndị a na-abụ ezigbo ndị enyi maka ebumnuche dị iche iche:
Ha bụ ìhè anya. Ha na-eme ka mmụba nke mbara dị n'ime ụlọ ahụ etinyere ha.
Ha na-ewe obere ohere. Nha ọtụtụ ụdị na-ese n'elu mmiri ga-enye gị ohere itinye ha na obere ebe ebe tebụl ọkọlọtọ enweghị ebe.
Ha na-ekwe ka hichaa ala ahụ nke ọma. A na-edozi ha na mgbidi nke na-egbochi ha ịgagharị. Agbanyeghị, n'ibuli elu, ha na-eme ka ihicha ụlọ ahụ kwa ụbọchị.
Ha na-achọ mma nke ukwuu. Site na iguzo na tebụl ọdịnala, ha na-enye ụlọ ahụ ihe mbụ.
Tebụl ndị na-ese n'elu mmiri na-ese n'elu mmiri bụ taa ndị kachasị ewu ewu ịchọ ime ụlọ ime ụlọ maka ekele ha na-eweta ha. Ọ bụ ezie na ndị nwere minimalist aghụghọ na ìhè-aj u: ọcha, creams, grays… na-ewere ọnọdụ dị n'etiti ime ụlọ ihi ụra nke nwere ọgbara ọhụrụ. Nwere ike ịchọta ha na otu drọwa ma ọ bụ abụọ iji mee ka ikike nchekwa ha na / ma ọ bụ jiri ọkụ na-arụ ọrụ nke mere na ọ dịghị mkpa itinye oriọna na ya.
Nordic sitere n'ike mmụọ nsọ
El Nordic ịke Ọ ghọọla afọ iri gara aga akara ngosi n'ime imewe ime. Na-ejikọta osisi okike na nkọwa ọcha, tebụl nke ụdị a na-eweta ìhè na ọkụ na ime ụlọ ihi ụra nke ụdị dị iche iche. Na ụkwụ anọ, ha n'ozuzu nwere otu drọwa ma ọ bụ abụọ nke ga-enyere gị aka ịnweta ihe ndị dị mkpa n'akụkụ akwa.
1. Ulo Nunila-Kave, 2. Sklum, 3. Emebere Larsen, 4. Sklum
Dị kpochapụwo na nke ọkaibe
Legma mma na ọkaibe na-akọwa ụdị ụlọ ime ụlọ gị? Ọ bụrụ otu a, akara abalị ndị a ga-adaba na ya. Ndi na achikota a acha ọcha na ihe ọla edo Ha bụ ndị kachasị ewu ewu maka ime ụlọ ihi ụra nke nwere mgbidi ọcha, ụlọ elu dị elu na nkedo na windo buru ibu.
Obere tebụl nke Mere na Ikea Otu aka nke oge a ga-enye ime ụlọ ime ụlọ agba agba ojii straightdị kwụ ọtọ na ntakịrị ụdị. You na-amaja na agba? Ekike nke jikọtara ụdị, ahịrị na akụkụ, dị ka nke Made, ga-enye ime ụlọ ihi ụra gị nke ọma n’etiti oge gboo na oge a.
Industrialdị ụlọ ndina eji arụ ọrụ n'ozuzu nwere ngwongwo ọla. Arefọdụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke mkpọchi ọla ndị ahụ ejiri mee ihe n'oge gara aga na ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ mahadum, agbanyeghị na a na-ejikarị ọdịdị na agba agba gburugburu ka emelite ha.
1. volọ Savoi-Kave, 2.Bavi-Sklum, 3. xlọ Trixie-Kave, 4.Nikkeby-Ikea, 5.Kluis-Miv Ime ụlọ Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ịchọta atụmatụ na jikọta ígwè na osisi iji nweta atụmatụ dị ọkụ karị. Ihe ndi ozo di egwu ma sie ike, karia ihe eji emeputa ulo oru. Dika homogeneous na nchacha, ka ha na nso nso ha.
Iji nye aka ime ka ime ụlọ gị na-emetụ aka, ị gaghị ahụ onye ga-enyere gị aka karịa ihe ndọba abalị ndị ahụ nke yitere ka ha si n'uko ụlọ nne nne gị pụta. Ekike nwere ụkwụ atụgharịrị, ahịrị ndị gbagọrọ agbagọ na ihu ọcha dịcha mma, ọ bụ ezie na anyị agaghị ewepụ ndị nwere ya ntupu ogwe ma ọ bụ cannage.
Ha enweghị otu ugwu dịka akụkụ anọ nke ehihie ma anyị ekwenyeghi na ha agaghị enwe ya, mana ha bụ nhọrọ na-ewu ewu. Emeputara n'ozuzu osisi lacquered na satin ụda ma ọ bụ na-egbukepụ egbukepụ, ha nwere nnukwu ike eji achọ mma.
1.Kurb-Kave Home, 2. Odie Mere, 3. Emebere Cairn, 4. Bebel 02-Sklum
Anya ọkụ, ha nwere ike inye anyị ihe ruru atọ ịchekwa ihe. Agbanyeghị, ndị a nwere ike ọ gaghị aba uru dị ka ndị nwere akụkụ akụkụ anọ. N'ihi gịnị? Maka na o siri ike karịa, nyere ọdịdị ya, iji ohere nchekwa ha na-enye anyị mee ihe.
Kedu ụdị ihe nnọchi anya abalị ị ga-ahọrọ iji tinye ọnụ ụlọ ihi ụra gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ngwongwo » Typesdị 6 okpokoro akwa akwa iji nye ime ụlọ